Midowga Yurub and Dowladda Federaalka Soomaaliyeed oo xiriirka ku xoojinayaan dusha Markabka hogaaminayaa Ciidamda Badda Midowga ee ka-hortagga Burcada | Eunavfor
Maanta, Xubna ka socda Dowladda Federaalka Soomaaliyeed ayaa u duulay dushaa markab jooga badda ka baxsan Muqdisho, lagana leeyahay Burtaqaal, hogaaminaayane Ciidamada Badda Midowga Yurub lana yiraahdo NRP Alvares cabral. Waxay wadahadal la qaateen Ergaga Gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, Taliyaha Howlgalka Ciidamada badda Midowga Yurub ee loo Yaqaan Atlanta iyo Madaxa Ergada ee EUCAP NESTOR si ay uga wada hadlaan sidi ay uga wada shaqayn lahaayeen sidi ay isaga kaashan lahaayeen xoojinta nabadgelyadda badda iyo horumarinta dhaqaale ee Soomaaliya.
Tani waxay ahayd kulanki ugu horeyey ee lagu qabto badda una dhexeeyey wakiilo ka socda Midowga Yurub iyo saraakiil ka socota Dowladda Soomaaliyeed. Wada-hadalada ka dib, Wasiiradii Soomaaliyeed waxaa lagu soo wareejiyey markabka-dagaal waxaana la-baray xubnihii la socday markabka.
“Kulanka maanta wuxuu ahaa fursad lagu muujinaayo sidi Midowga Yurub uga go’an tahay ku taagyeeridda Soomalia sidi ay u noqon lahaynd dal xasilan oo deggan, waxaa sidaa yiri Ergaga Gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, Michele Cervone d’Urso. Waxaannu caddaynay siyaabaha uu Midowga Yurub ku taagyeeri karo ciidamda badda Soomaaliyeed si loo kordhiyo awoodooda si ay ula dagaalamaan burcadda iyo dhaqa-dhaq-dhaqaaqyada kalee sharci darrada ah ee Badda ka jira, in la xoojiyo nabadgelyadda badda laakin sidoo kale in laga faai’deysto khayraadka badda. Qaybta nabadgelyadda, guud ahaan, waxay ahaan doontaa qayb ka mid ah ” Heshiiska Cusub” tasoo lagu go’aamin doono “Shirka Heshiiska Cusub ee Soomaliya” laguna qaban doono Brussels bisha setember.”
EUCAP NESTOR waa howl rayid ah ee uu hogaaminaayo Midowga Yurub loogana gol leeyahay horumarinta awoodaha xagga badda ee dalalka dhaca Geeska Afrika iyo galbeedka badda Hindiya.
Ciidama badda ee Midowga Yurub waxay caabiyaan kana hortagaan cadaadiyaane falalka burcadnimada iyo dhaca hubeysan ee ka dhaca badda ka baxsan xeebaha Soomaaliya. Ciidamada badda ee Midowga Yurub waxay illaaliyaan maraakiibta u raray barnaamijka Cuntada Adduunka ee gar-gaarka u sida Soomaaliya iyo maraakiibta AMISOM. Ciidama badda ee Midowga Yurub waxay kaloo gacan ka geystaan kormeeridda howlaha kalluumeysi ee xeebaha Soomaaliyeed.
Read more at: https://eunavfor.eu/midowga-yurub-and-dowladda-federaalka-soomaaliyeed-oo-xiriirka-ku-xoojinayaan-dusha-markabka-hogaaminayaa-ciidamda-badda-midowga-ee-ka-hortagga-burcada/